Dɛn Na Yebetumi De Akyɛ Yehowa?
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | November 2018
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guadeloupean Creole Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kannada Kekchi Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
BERE bi Yesu kaa sɛ: “Ɔma mu wɔ anigye pii sen ogye.” (Aso. 20:35) Nokwasɛm titiriw yi, ɛfa yɛne Yehowa abusuabɔ ho. Adɛn nti na yɛreka saa? Yehowa akyɛ yɛn nneɛma pii a ɛma yɛn ani gye, nanso sɛ yɛkyɛ Yehowa ade a, yɛn ani betumi agye pa ara. Dɛn na yebetumi de akyɛ Yehowa? Mmebusɛm 3:9 ka sɛ: “Fa w’ahonyade hyɛ Yehowa anuonyam.” Yɛn ‘ahonyade’ no, ebi ne yɛn bere, yɛn dom akyɛde, yɛn ahoɔden, ne yɛn ahode. Sɛ yɛde yɛn ahonyade a ɛte saa boa nokware som a, na yɛrekyɛ Yehowa ade. Yɛyɛ saa a, ɛma yɛn ani gye papaapa.
Dɛn na ɛbɛboa yɛn na yɛammu yɛn ani angu yɛn ahonyade a yɛde bɛkyɛ Yehowa so? Ɔsomafo Paulo ka kyerɛɛ Korintofo no sɛ ‘wonyi biribi nsie’ mfa nyi ntoboa. (1 Kor. 16:2) Sɛ wopɛ akwan a yɛfa so yi ntoboa wɔ wo mpɔtam hɔ ho nsɛm pii a, dɛn na wubetumi ayɛ? Yɛsrɛ sɛ hwɛ adaka a ɛwɔ ase ha no.
Ɛnyɛ aman nyinaa so na obi betumi afa Intanɛt so ayi ntoboa. Nanso, wubehu akwan foforo a wubetumi afa so ayi ntoboa wɔ wɛbsaet (donations web page) hɔ. Aman bi so no, nsɛm a nkurɔfo taa bisa fa ntoboa ho no, wonya ho mmuae wɔ baabi a nkurɔfo yi ntoboa wɔ jw.org wɛbsaet hɔ.
Ɔkwan Tiaa a Yɛfa So Yi Ntoboa Wɔ Intanɛt So
ƐNYƐ DEN SƐ WUBEHU
Bɔ donate.jw.org hyɛ web browser no mu
Wubue JW Library® a, klik “Donations” so
NE YƐ NYƐ DEN
Wubetumi ayi ntoboa bere biara, anaa wubetumi akyerɛ sɛ wubeyi ntoboa pɔtee bi bosome biara:
Wiase Nyinaa Adwuma
“Tɔ Nokware Na Ntɔn”
“Mɛnantew Wo Nokware Mu”
Fa Wo Ho To Yehowa So Na Nya Nkwa!
Hena Na Ɔkyerɛ Wo Nea Ɛsɛ Sɛ Woyɛ?
Worenya Yehowa Adwene Anaa?
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM November 2018